Face Time waa app la yaab ku abuuray by Apple Inc. Tani wax soo saarka video tilifoonnada ayaa ridiculously u sahlay inay xiriiriso kuwa kale by samaynta video ama audio calls. Tani cajiib ah app Face Time ayaa lagu daray qalabka oo dhan taageeraya macruufka iyo sidoo kale on kombiyuutarada Macintosh la Mac OS X 10.6.6 iyo ka dib.
facetime lacag la'aan ah Mac
download facetime for free Mac
free download facetime waayo Mac
App Tani markii hore loogu talagalay iPhone 4 users laakiin hadda ay sabab u tahay caan degdeg ah, waxa uu noqonayaa mid feature a dhisay-in dhammaan qalabka Apple oo ay ku jiraan iPhone, iPad, Mac, iyo iPod taabashada. Communication waa qayb muhiim ah oo nolosha maanta iyo hadda ku haboon waxaad isticmaali kartaa Face Time on your Mac inay ku sii xiriiri kartaa ganacsiga iyo nolosha shakhsiyeed.
In aad Mac, waxa keliya ee aad u baahan tahay xiriir aad internet ama macluumaadka gacanta oo markaas aad si fudud la hadli kartaa xiriirada iyadoo keliya hal click. App Tani tartan rasmi ah ee Face Time ayaa ka dhigtay in ay suurto gal in aad la hadasho qoyskaaga ama saaxiibadaa halka aad ku jirto safar, joogi kartaa shaqaalaha aad la xiriiri, ku siin karaan bandhig, hadal macaamiisha iyo liiska on tagaa.
Waa kama dambaysta ah ee, hal abuur leh, cad, dareen iyo habka habboon in la sameeyo video ama cod ah wicitaanada iyo weli lala xiriiro ee dunida ka mid ah aaladaha Apple. Maqaalkani waxa uu awood kuu siinaysaa si ay u fahmaan qaababka dajinta aasaasiga ah, isticmaalka iyo waxyaalo kale oo waqti Face aad Mac.
3 Sida loo dhigay ilaa FaceTime on Mac:
3.3 Inbadan oo ka socda goobtayda
Wixii isticmaalaya Face Time on your Mac, waxa kaliya arrin qasabno yar. Face Time waa app ah hidi ee Mac. Dhamaan versions dambeeyay ee Mac horay pre-rakibay Face Time.
All inaad sameyso waxaa si fudud ku dar lambarka iPhone iyo ID email Apple oo wuxuu ku raaxaysan kartaa mid ka mid ah qalabka video taleefoonka oo tayo sare leh ugu on your Mac. Waxaad si fudud ku dari kartaa xiriirada ee dadka kale ee isticmaalaya qalabka Apple oo ay ku jiraan Mac, iPhone, iPad, iPod, iwm. Waxaad isticmaali kartaa email Apple Id sida ID u dagdagi dhawaaqaha in aad la xiriirto dadka kale ee adduunka ee Apple.
In case you do not have an in-build Facetime app in your mac, aad si fudud u soo dejisan kartaa adigoo booqanaya App Store Mac ah. Wixii la isticmaalayo Store App Mac, waa in aad haysataa ugu yaraan Mac OS X 10.6 ama ka sareeya. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa App Store Mac ah in aad desktop ama waxaad ka heli kartaa pre-rakibay App Store.
Raadi Facetime app by writing Facetime in the search bar of the in-build Mac Apple store or directly click HALKAN.
Ku qor ID Apple for iibsiga software this
Waxaa muhiim ah in la fahmo, in Time Face aad rakibi doonaa Mac App Store waa version waayeel ah. The latest version of Facetime is available in Mac OS X 10.6 ama ka sareeya. It is recommended to download FaceTime only if you are using an older version of Mac.
Marka aad ku rakiban ama heli Face Time software in aad Mac, waxaad samayn kartaa xad videos ama calls audio in ay dadka kale ee isticmaalaya qalabka Apple oo dhan.
Ama waa in aad haysataa Mac la Mac OS ama aad qabto Mac OS X 10.6 ama ka sareeya.
Dhammaan xiriirada in aad rabto in aad isticmaasho for video ama audio wicitaanada waa in uu leeyahay Apple Waxaan Qalabka ama waa in ay la isticmaalayo Mac.
Waxa xiiso leh, Waxa kale oo aad ku raaxaysan karaan Face Time audio ee Mac la isticmaala oo isticmaalaya Apple Watch.
Hubi inaad leedahay xiriir sax ah iyo si dhakhso ah internet si aad ku raaxaysan karaan tayada buuxa video ama audio calls aan Goynta.
Waa inaad aad ID Apple inay bilaabin isticmaalka app this.
Sida loo dhigay ilaa FaceTime on Mac:
Waxaad u baahan tahay inay raacaan dhammaan tallaabooyinka hoose si aad u bilowdo xira dhex Face Time leh users kale.
marka hore, abuurtaan aad software Face Time on your Mac. Waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya midkood software ah pre-rakibay on Mac ama ay ku rakibidda Face Time ka Mac App Store
Ku qor hadda Apple ID iyo haddii aadan haysan ID aad, aad awoodid abuuro mid ka mid ah.
Buuxi xaqiijinta habka
Waxaad xaqiijin kartaa macluumaad by link labada helitaanka on your cinwaanka emailka ama waxaad ka heli kartaa xaqiijinta a code on your lambarka taleefanka.
Kadib markii geedi socodka xaqiijinta, waa inaad ku dar taleefan lambarrada iyo IDs email of other contacts to start making your first FaceTime call.
software wuxuu ku weydiin doonaa doorashada si ay u sameeyaan cod ah ama video ah call. Waxaad dooran kartaa wax kasta oo aad dooneyso inaad ku xiran dadka kale ee.
Ku rid macluumaad ah ee isticmaala kale oo ay ku jiraan cinwaanka e-mail, magaca ama lambarka taleefanka. Waxaad ku samayn kartaa adigoo galaya macluumaad this on bar raadinta.
Oo danbaynti, ADIGANA telefoonka ama camera si ay u sameeyaan call tayo leh app ka qabanin ee Face Time a.
Haddii aad rabto in aad ku xiran is inay dadka kale ee Apple ama haddii aad helayso call a oo aan ogaado waxaan Phone ama aan loo gashto, markaas waa inaad si dhakhso ah isticmaali kartaa Mac inay ka qayb galaan call.
Waxaa intaa dheer, haddii aad tahay dhexe ee wicitaankaaga iyo rabto in aad beddesho goob kasta ka dibna aad u soo guurto aad mouse iyo riix mid ka mid ah fursadaha
Waxaad ka xidhi karaa codbaahiyaha ama waxa Codfur
Waxaad la xiriiri kartaa video ku saabsan iyo off ku xiran doorbidkaaga
Waxaad ucabirto kartaa screens si aad u daawato sawirka cad
Waxaad soo afjari karo wac mar kasta oo aad rabto in aad
Lacalla, aad rabto in aad beddesho goob kasta oo ka mid Face Time on your Mac, aad ku haboon ku samayn kartaa socday Apple menu u gudub nidaamka doorbidida ka dibna si farriimaha tago. window A heli doontaa furan sida hoos ku qoran:
Waxaad si fudud u noqon karaa ama off feature kasta oo aad jeceshahay. Waad beddeli kartaa codka ah farriimaha, walxood app, updates wargelinta iyo si ka sii badan
Muuqaal kale oo xiiso yahay, you can make group calls through group Facetime audio or video calls. Illaa 32 xiriirada loo isticmaali karaa calls group. Tani waa mid aad waxtar u leh shaqaalaha, ururka, iyo noocyada. Tani sahasha iyaga in ay ku xidhmaan shaqaalaha iyo macaamiisha ka adduunka oo dhan iyadoo keliya hal click.
The article here has detailed information to setup and use facetime on mac. Waxaan rajeynayaa in qodobkan uu ahaa mid wargelin adiga iyo aad heshay xogta ka waxtar leh gabal this. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, do share it in the comment box below and share with your friends and family.